QAYB KA MID AH TAARIIKHDII SOMALI WEYN
Heesta Calanka Ugaaslabe (Bani-Jacfarland National Anthem)
Xadrada Calanka Ugaaslabe (Bani-Jacfarland National Xadro)
Garadag, Nov 30, 2010 (AllDhooftinle.com)
TAARIIKHAHA MUHIIMKA AH EE SOOMAALIYA - DAGAALKII 1977 EE XORREYNTA SOOMALI-GALBEED
Waxaa ayaandarro ah in ay jiraan kooxo isbahaystay oo ay ujeedadoodu tahay in ay khaldaan ama marinhabaabiyaan taariikhda Soomaaliyeed, gaar ahaan taariikhdii dawladdii kacaankii 21 Oktoobar ee ay ciidamadu hoggaaminayeen. Taariikhaha muhiimka ah ee laga beensheegayo ayaa waxaa ka mid ah taariikhdii dagaalkii gobonimodoonka ahaa oo ummadda Soomaaliyeed ay wadajirka ula gashay dalka Itoobiya sanadihii 1977 -1978, lana magac baxay ?Dagaalkii 77?. Dagaalkaas taariikhiga ah oo dhulka Soomaali Galbeed looga xoraynayay gumaystaha Itoobiya oo ay gumaysteyaalkii kale ee reer yurub hadiyadda u siiyeen xilliyo hore oo kala duwan.
Kooxaha isku bahaystay marin habaabinta taariikhaha muhiimka ah ee ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay soo diyaariyeen sheekobaraleey aan sal iyo raad toona lahayn, xaqiiqdana aad uga fog. Kooxahaas ayaa waxay faafinta beentooda haatan u adeegsadaan qaar ka mid ah shabakadaha ama web-site-yada Soomaalida. Waxayse horraantii u samaysteen telefishan maxali ahaa oo la oran jiray RAAD. Ka dib markii uu socon waayay ee uu telefishinkaasi xirmayna waxay u leexdeen oo ay adeegsadaan laanta Afka-Soomaaliga ee idaacadda BBC-da iyo telefishanka Af-Soomaaliga ku hadla ee UNIVERSAL iyo web-site-yadaba. Kooxahaas ayaa sheekobaraleydooda ugu magac daray ?TAARIIKHDA SOOMAALIYA?. Waxaana garwadeen ka ah Wariye Axmed Xasan Cawke iyo Wariye Aadan Nuux Dhuule.
Shakhsiyaadka ay kooxdaani waraysteen ayaa waxaa ka mid ah Gen Maxamed Nuur Galaal iyo Gen Cabdiraxmaan Warsame Cilmi ?Caarre? oo labaduba ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii ciidamada Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dagaalkii Itoobiyaanka lala galay islamarkaasna kala ahaa taliyeyaashii labadii aag ee Jigjiga iyo Dirirdhaba iyo nin sheegtay in uu xilligaas Taliye Urur ahaa, magaciisana ku sheegay in la yiraahdo Caaqil.
Waxay labada nin ee danbe, waa Caarre iyo Caaqile, isku raaceen in askar tira badan oo ka mid ahaa ciidanka Soomaaliya lagu laayay magaalada Jigjiga xilligii uu dagaalku socday. Waxay kale oo sheegeen in dadkaas la laayay ay ahaayeen askartii ciidanka ugu wanaagsanayd oo ayaga madaxda ahaa lagu amray in ay ciidanka ka soo dhex xulaan, si loo dallacsiiyo, markii ay soo xuleenna lagu xasuuqay magaalada Jigjiga. Laakiin waxay isku khilaafeen in Gen Caarre uu yiri ?Madaxdii ciidamada iyo madaxdii dalka ayaa amarkaas bixiyay, aniga ayaana aagga Taliye ka ahaa.?, halka Caaqilna uu sheegayo in uu aagga Taliye ka ahaa Col Maxamuud Sheekh Cismaan ?Cirro?, amarka askarta lagu laayayna uu asagu bixiyay.
Haddaba waxaa la yaab leh in wariye Cawke uusan raggaan wax su?aal ah ka weydiin meelaha ay isku khilaafsan yihiin, si loo ogaado midkooda saxan iyo kan khaldan. Sidoo kale arrinta ku saabsan ragga la laayay kama aysan waraysan madaxdii ciidamada ee la dhigga ahaa Galaal iyo Caarre iyo kuwii ka sareeyay midna. Taas oo noo caddaynaysa in aan xaqiiqo doon la ahayn ee ujeeddooyin gaar ahi jiraan.
Ka dib markii aan ogaannay in duulaan lagu yahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo koox yari ay iminka doonyso in ay qulub iyo jahowareer galiso taariikho ummadda Soomaaliyeed muhiim u ah ayaa waxaan go?aansannay in aan baaritaan ku samayno qaar ka mid ah taariikhaha la marin habaabinayo oo ay ugu horayso taariikda dagaalkii 77. Haddaba waxaan halkaan idiinku soo gudbinaynaa dhacdooyin iyo arimo muhiim ah oo ku saabsan dagaalkii 77 ee akhris wanaagsan.
Xilkii Gen Caarre ee xilligii uu dagaalku Socday:
Gen Cabdiraxmaan Caarre wuxuu xilligii uu dagaalku socday ahaa Taliyihii Aagga Jigjiga ee ciidamadii Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Halkaas oo ah halka lagu laayay ciidkanka ay leeyihiin dalacsiin ayaa loo soo ururiyay, ka dibna waa la laayay.
Taliye Ku Xigeenkii Aagga Jigjiga:
Abbaanduulihii Aagga Jigjiga ee xilligii dagaalka ayaa waxaa ahaa Gen Axmed Warsame oo haddana wali nool.
Yaa amri karay Gen Cabdiraxmaan Caarre:
1) Wasiirkii Gaashaandhigga M Gen Maxamed Cali Samatar
2) Abbaanduulihii Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Gen Maxamuud Geelle Yuusuf
3) Taliyihii Aagga Woqooyi Gen Yuusuf Axmed Salxaan.
4) Abbaanduulihii Aagga Woqooyi Gen Cabdullahi Cali Cumar
Masuuliyadd Darro iyo Waajibaad ka Carar:
Gen Caarre wuxuu sheegay in madaxdii ciidamada iyo kuwii dalka ay ku amreen in uu ragga ciidanka ugu fiican ay soo ururiyaan si loo dalacsiiyo, ka dibna la laayay. Arrintaan waxay dhalinaysaa su?aalo waaweyn oo ay tahay in jawaab rasmi ah loo helo, laakiin aan Caarre la weyndiin oo uu Cawke iska baal maray. Su?aalahaas ayaa waxaa ka mid ah:
1. Maxay tahay sababta raggii dallacaadda mutaystay loo laynayo?
Maxaa kalifay in ragga la dalacsiinayo furintii laga soo saaro? Sida caadiga ah ciidanka ama askarta waxaa la dalacsiiyaa ayagoo xeryahooda jooga, goob kasta oo ha ku sugnaadee. Waligeed wax nimankaan ka hor sheegaya dadka la dalacsiinayo ha la isu soo ururiyo lama maqal. Sidee nin Gen ciidan ah arrintaas shir ula yimid? Askarta marka la dalacsiinayo, ma in furinta la soo banneeyaa, waliba kuwii askarta ugu fiicnaa?
2. Sidee Gen Caarre u yeelay amar khaldan oo ah in uu 84 askari oo kuwii ciidankiisa ugu fiicnaa ah inta soo xulo uu haddana sabab la?aan u laayo? Haddii uu amarkaas qaatay ciddii doontaaba ha siisee soo danbiile cad ma aha? Marmarsiinyo ma u noqonaysaa madaxdii ciidanka iyo dalka ayaa amar igu siiyay? Miyuusan ahayn General masuul ka ah oo leh damiir iyo garasho uu wixii khaldan ama xun uu ku diido, xitaa haddii uu naftiisa ku waayayo? Mise arrinta ayaa sidaas ka duwanayd oo Gen-ka ayaa hadda u bareeray been iyo hagardaamaynta taariikhda ummadda Soomaaliyeed?
5. Waxaa jiray Aagag kale oo ay ciidamadii Xoogga Dalku ka dagaalamayeen, Waqooyi oo kaliya ayaa waxaa ka jiray Saddex(3) Aag. Maxaa haddii ciidanka la iska xasuuqayay Aagagga kalena askarta loogu layn waayay? Sidoo kale BBC-du su?aashaan muhiimka ah Caarre iyo Caaqil midna ma aysan weydiin!! Sababtu waa maxay?
Col: Cirro iyo beenta uu sheegay ?Caaqil? oo sheegtay inuu taliye urur ahaa.
Col Cirro, wuxuu xilligii dagaalka ahaa Madaxii Taakulada ee aagga Waqooyi. Fadhidhigiisuna wuxuu ahaa magaalada Hargaysa. Taliye aagna waligiis ma noqon. Waxaa kale oo aan kor ku soo sheegnay Madaxdii Ciidankii Xoogga Dalka ee xilligaas amar siin kartay Taliyihii Aagga Jigjiga Gen Cabdiraxmaan Caarre iyo xilalkii ay madaxdaasi kale hayeen. Madaxdaas oo uusan Col Cirro ka mid ma ahayn. Arrimahaan ayaa kuligood caddeynaya in Caaqil uu BEEN HAWAAS yahay, taariikhdana uu ka been sheegay, ummadda Soomaaliyeedna meel uga dhacay. Waxaa kale oo aan la rumaysan karin in uu Caaqil ka mid ahaa ciidamadii xoogga ee aagga Jigjiga maadaama uusan kala aqoon xilalkii Gen Caarre iyo Col Cirro.
Ujeedadii Dagaalkii 77:
Labada General, waa Gen Galaal iyo Gen Caarree, waxay isku raaceen in ujeedada dagaalku ahayd in ciidankii Soomaaliyeed lagu burburiyo ayaguna ay dawladdii uga digeen in dagaalkaas la qaado.
Go?aankii dagaalka lagu galay waxaa ansixiyay goleyaashii distuuriga ahaa ee dalka sida (Golihii Wasiirrada, Golihii dhexe iyo golihii shacabka) taasna waxaa horay u caddeeyay Cabdiqaasim Salaad Xasan, Cumar Salaad Cilmi iyo Cabdullaahi Maxamuud Xasan, kuwaas oo waraysiyadoodii BBC-da una duuban yahay horayna looga soo daayay.
Fashilaaddii Galaal Ee Dirirdha Iyo Xilligii Dagaalkii 77:
Marka laga hadlayo Taariikhda dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ee sanadihii 1977 ? 1978 ayaa waxaa jira dhacdooyin badan oo taariikhi ah oo aan aad looga hadlin, kuwo kale oo badanna si ku talogal ah looga been sheego, sida dhacdada Jigjiga oo aan kor uga soo hadalnay oo ka mid ah taariikhaha aad loo marin habaabinayo.
Gen Galaal ayaa wuxuu sheegay in uu Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre u soo jeediyay in ciidamadii Aagga Baali ee dhinaca koofur galbeed, Taliye Aagna uu u ahaa Col Cabdullahi Yusuf, la soo dhaqaajiyo oo Itoobiyaanka dhinacaas laga soo cadaadiyo si uu culaysku uga yaraado ciidanka galaal ee Aagga Dirirdhabe, sidaasna magaalada lagu qabto. Gen Galaal ayaa wuxuu intaas ku daray in Madaxweyne Maxamed Siyaad uu ugu jawaabay ?Ma waxaad doonaysaa in cid aan aniga ahayn loogu yeero Guulwade??, taladiina wuu iga diiday ayuu yiri Gen Galaal.
1. Waraysi uu Col Cabdullahi Yusuf telefishanka Universal, siiyay sanadkii hore ee 2009-ka wuxuu ku caddeeyay in Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu amar ku siiyay in ciidamadii koofur galbeed ee Aagga Baali oo uu hoggaaminayay Col Cabdullahi Yusuf uu soo dhaqaajiyo oo uu qaado waddo uu Maxamed Siyaad horay u maray wakhtigii uu askarta Ingriiska ka tirsanaa oo uu tilmaanteeda iyo meelaha ay martaba si fiican ugu sheegay. Arrintaas uu sheegay Col Cabdullahi Yusuf waxay beeninaysaa in Maxamed Siyaad uu Gen Galaal ka diiday in ciidamadii Aagga Baali la soo dhaqaajiyo. ?Waa haddiiba uu taladaas soo jeediyaye?!?
2. Maxay tahay sababta uu Maxamed Siyaad Galaal ugu sheegayo waxa asaga calooshiisa ku jira? Muxuuse ka faa?iidayaa in uu yiraahdo ?Ma waxaad rabtaa in Maxamed aan aniga ahayn loogu yeero Guulwade??. Dadka Soomaaliyeed oo Maxamed Siyaad yaqaanna Galaal oo kaliya ma ahan, waxaana la isku raacsan yahay in madaxweyne Maxamed Siyaad uu ahaa nin aad u caqli badnaa, waayo aragna ahaa. Hadalladaas raqiiska ah oo kalena aysan ka suuroobin ee ay tahay yihiin been abuur uu Galaal sameeyay, asaga oo isku dayaya in uu ka baxsado ceebtii, fashilkii iyo khasaarihii dagaalkii Dirirdhabe ee uu Soomaalida uga soo jiiday (Hoos ka akhri fadeexaddaas) .
Waxay saraakiil xog ogaal ahaa ii sheegeen in AUN Madaxweyne Maxamed Siyaad uu aad u dhibsan jiray in meel uu joogo lagu soo qaado magaca Galaal oo uu hubay inuu yahay in uu wadanka khiyaamay, ciidankana dagaalka ku dhabar jabiyay.
Maxay ahayd Sababtii Magaalada JigJiga Ciidanka Loogu Laayay Xilligii Dagaalkii 77?
Markii aan samaynay baaritaan ku saabsan in ay jiraan ragg ciidan ahaa oo lagu laayay magaalada Jigjiga xilligii uu socday dagaalkii 77 iyo sababtii kaliftay in ayadoo dagaal lagu jiro la laayo ciidan ay dadka qaarkii ku sheegayaan inay ahaayeen raggii ciidamada ugu qiimaha badnaa oo la yiri waa la dalacsiinayaa ayaa waxaan rag kala duwan oo ka mid ahaa ciidamadii xilligaas ju sugnaa magaalada Jigjiga iyo kuwo kale oo xog ogaal ahaaba ay noo sheegeen in raggaas la toogtay oo ciidanka ka mid ahaa lagu toogtay si sharci ah, islamarkaasna ay xukuntay Maxkamaddii Ciidamada Qalabka Sida Ee Soomaaliyeed.
Sababtu Maxay Ahayd?
Waxaa jirtay in markii ay ciidamadii Soomaalidu qabsadeen magaalada Jigjiga oo ay ciidamadii cadowguna aysan fogayn ee la isku hayay goobihii uu dagaalku ka socday oo markaas ahaa buurta Kaaraamardha oo magaalada Jigjiga dusheeda ah.
Maalintii saddexaad ayaa kuwii aan amarka raacin ee aan magaalada ka bixin la isu soo ururiyay oo maxkamaddii dagaalka la soo hor taagay. Maxkamaddiina waxay dhammaantood ku xukuntay dil toogasho ah ayadoo loo cuskaday ?Xeerka dagaalka iyo Ammar diido goob dagaal?. Sidaas ayaana raggaas lagu toogtay.
1. In la ilaaliyo xuquuqda dadka iyo magaalooyinkii ay Soomaalidu qabsatay oo muddo badan gumaysi ku jiray Soomaalidana aad ugu faraxsanaa imaanshahooda, soona dhaweeyay.
2. In nidaamka, kala danbaynta iyo anshaxa ciidamadu aysan lumin. Taas oo haddii ay dhacdo uu ciidankuna burburi lahaa dagaalkana lagu jabi lahaa.
Maxkamaddii Ciidamada Qalabka Sida Ee Xukunka Ridday Iyo Xubnihii Ugu Sareeyay.Col Cismaan Maye Gudoomiye
Col Yuusuf Muuse Xeer Ilaaliye
Waxaan oran lahayn maadaama taariikhda gobonimodoonka Soomaaliyeed ay tahay mid ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed islamarkaasna uu halgankii yahay mid wali socda, soconna doona ilaa laga xoreeyo dhulka Soomaali Galbeed ay lagama maarmaan tahay in cid kasta oo arrimaha dagaalkii taariikhiga ahaa ee 77 u dhuun daloosha, xog ogaal ka ah amaba ka qayb qaadatay ay ka qayb gasho ka run sheegidda arrintaan lagu marin habaabinayo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Taas oo haddii la waayo ay dhici karto in la khaldo jiilalka danbe ee aan ayagu waxba kala socon taariikhahaas muhiimka ah, taas oo noqonaysa dhagar iyo dulmi aan jiilalka danbe ka galayno, ayaguna ay nagu haaraami doonaan.
Akhristeyaasha, Aqoonyahanka, xog-ogaalka iyo madaxdii qarankii Soomaaliyeedba waxaan u soo jeedinaynaa in ay gil-gishaan, una istaagaan sidii loo soo gudbin lahaa taariikhaha dhabta ah oo ay ummadda Soomaaliyeed leedahay.
Barnaamijkaani waa qaybtii ugu horaysay ee barnaamij taxane ah oo aan ku eegi doonno qaybo ka mid ah taariikhaha Soomaaliya iyo waxyaabo warbaahinta laga
siidaayay oo mudan in la xaqiijiyo.
Haddii aad haysto wax faahfaahin ah oo ku saabsan arrimaha aan uga hadalnay qormadaan iyo wixii su?aal ama fikrad ah fadlan noogu soo hagaaji E-mail-ka ah mr_dinix@hotmail.com.
Saraakiil Sare XDS ka mid ahaa iyo waraysiyo BBC, Universal TV.
- S G Maxamed Cali Samatar (Wasiirkii Gaashaandhigga ee xilligii Dagaalka)
- Gen Maxamuud Geelle Yuusuf (Abbaanduulihii XDS ee xilligii dagaalka)
- Dr Cabdulqaasim Salaad Xasan (Go?aankii dagaalka ee Golihii Wasiirrada, Golihii Dhexe iyo Golihii Shacbiga)
- Lanta Afka Soomaaliga ee BBC-da (Waraysiyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa Caarre, Galaal)
- Gen Axmed Warsame (Abbaanduulihii Agga Jigjiga ee xilligii dagaalka)
-Gen Cabdinaasir Xaaji Xaashi(Aagga Dirirdhabe iyo dagaalkii 77)
- Col Cabdicasiis Sh. Cabdisalaan Aw-Maxamuud".
- Col Cabdi Cismaan Nuur (Xog ogaal Aagga Jigjiga iyo dagaalkii 77)
- Universal TV (Waraysiga Col Cabdullahi Yusuf).
Eng Shire Cabdisamad Jaamac